၂၀၁၃ ပြီလ NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဧပြီလ
'' Down နှင့်အဝေးသင် '' တိုးချဲ့ဂရစ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်အပြင်အသံလွှင့် In-အားကစားကွင်းအတွေ့အကြုံ MELVILLE, နယူးယော့ '' ပရိသတ်များမှစိတ်လှုပ်ရှားထည့်ပေးသည် - ChyronHego ရဲ့ "ဆင်းနှင့်အကွာအဝေး" အဆိုပါ Jacksonville Jaguar ရဲ့ Virtual 30st ၏ပထမဆုံးအားကစားကွင်း Jumbotron ဖြန့်ကျက် installed ကြပါပြီ - ဧပြီလ 2015, 1 အထူးသအမေရိကန်ဘောလုံးများအတွက်ဒီဇိုင်းဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်။ virtual 1st အဆိုပါ Real-time အရေးယူမှုတိုးမြှင့်ကာတွန်းကို virtual ပထမဦးဆုံး-Down နှင့်လိုင်း-of scrimmage ဂရပ်ဖစ်ပေးပါသည် ...
Sonzero ရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ဥဩစတူဒီယိုနှင့်အတူမဟာဗျူဟာ Link ကိုတဆင့်ထုတ်လုပ်မှုပါဝါတိုးမြှင်
Los ANGELES- Sonzero ရုပ်ရှင်, ဆုရကြော်ငြာဒါရိုက်တာဂျင်မ် Sonzero များ၏ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ, ဥဩ Studios က, ဟောလိဝုဒ်မှာအသစ်တခုအိမ်ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်တူးသည့်ဥဩကျောင်းဝင်းအပေါ်ခေတ်ပြိုင်ရုံးခန်းများနှင့်စတူဒီယိုရဲ့ကျယ်ပြန်ပစ်ခတ်မှုအာကာသဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်, ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအသာယာအဆင်ပြေမှုများပါဝင်သည်။ ဥဩအထူးသဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံတဲ့တွေအများကြီးအပေါ်ရှစ်ပစ်ခတ်မှုအဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ထား ...
Ace ကို & Jig များအတွက် Young ကဒါရိုက်တာရဲ့စက္ကန့်ဖက်ရှင်ကိုဗီဒီယို Style.com ရဲ့ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း featured ။ ပယ်ဖျက်ထားသည်မှာ Los Angeles မြို့-ခုနှစ်, ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Ace ကို & Jig များအတွက်အီဗာ Michon ဒါရိုက်တာတိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်လူငယ်တစ်ဦးပုံစံသူမရိုက်ကူးဖို့ထင်ခဲ့သည်ဗီဒီယိုဖြစ်ပျက်မဟုတ်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန် LA ကရောက်ရှိလာသည်။ ဒါကြောင့်သူသည်ကိုယ်နှင့်အတူ ... တချို့အရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကနေဒါပေါ့ပ်ရန်သတ်မှတ်ရန် ...
ဒါဟာရီးရဲလ်ရဲ့ဒါကအချိန်! Riedel ရဲ့ STX-200 Professional က Skype ကို Interface ကိုမက်ဒရစ်မှ Connect ကိုပရိသတ်များကူညီပေး
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဧပြီလ 30, 2015 - ပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအသင်းမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိတ်သတ်တွေရောက်စေဖို့ created တစ်-of-a-မျိုး "ဒစ်ဂျစ်တယ်စတစ်ကာ" ပဏာမစဉ်အတွင်း Microsoft က (R) နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အတွက် Riedel ဆက်သွယ်ရေး STX-200 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Skype ကိုအသုံးပြုခဲ့ (R) တစ်ဦးကို real-time Q & Real Madrid အသင်းပရိတ်သတ်တွေနှင့်ကစားသမားများအကြားတစ်ဦးက session ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် interface ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖအားဖြင့်လိုင်စင်ရ, အ STX-200 Skype ကို leverages တဲ့ stand-alone, ထုတ်လွှင့်တန်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ...
လန်ဒန် - ဧပြီလ 29, 2015 - တားမြစ်ထားစျေးကွက်-ဦးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို Forscene ၏ထုတ်လုပ်သူ, BAFTA တော်ဝင်ရုပ်မြင်သံကြားလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ KEO ရုပ်ရှင်ဘန်ကောက်လေဆိပ် "များအတွက်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ Forscene ထည့်သွင်းကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် "က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်လိုက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဘီဘီစီအဘို့ပြင်ဆင်ကြ၏။ Forscene တစ်ဝေးလံခေါင်သီ-ကြည့်နှင့် "ဒုတိယပြင်ဆင်ရန်" ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေမယ့်မသာ ...
ကွမ်တမ်အလေး NAB ဆုပေးပွဲနှင့်အတူလုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြု
ကုမ္ပဏီ IABM ဂိမ်း Changer ဆုကို San Jose, ကာလီဖိုးနီးယားဆွတ်ခူးနေစဉ် Q-တိမ်တိုက်မော်ကွန်းတိုက်နှင့် StorNext Pro ကို Solutions, အသံလွှင့် Beat မှစ. StudioDaily နဲ့ TV နည်းပညာထိပ်တန်းဂုဏ်ထူးရယူနိုင်သော - ဧပြီလ 29, 2015 - Quantum ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ။ မှာ၎င်း၏တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်မှုအားဖြည့် ယင်း၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်လေးဂုဏ်သိက္ခာဆုဝင်ငွေဟာ 2015 NAB ပြရန်။ ထုတ်လွှင့် Beat ကကုမ္ပဏီရဲ့အသိအမှတ်ပြု ...